Fitsangantsanganana an-dranomasina Baltika 2016 | Vaovao momba ny dia
Na dia efa amin'ny volana jolay aza isika dia mbola misy ny olona tsy nanakatona ny fialantsasatra na miandry ny tolotra farany hanararaotra ny vidiny tsara kokoa. Tianao ny fitsangantsanganana an-dranomasina? Misy safidy maro ary eto Eropa Fitsangantsanganana an-dranomasina Baltika no filaharan'ny andro.
Betsaka ny orinasan-dranomasina mitsivalana amin'ireo seranana samihafa amin'ity ranomasina anaty ity ary ny fomba handaminana an'io karazana dia io dia tsy zavatra ataontsika hatramin'ny iray andro ka hatramin'ny ampitso, androany dia misy ny sambo fitsangantsanganana ho an'ny taom-pilalaovana 2016/2017. Vao manomboka ny Jolay ka afaka mieritreritra Aogositra isika. Manana iray volana ve ianao hahitana, hanapa-kevitra, handoa ary handrafitra ny fifaliana? Heveriko fa izany, ka ireto ny sasany amin'ireo Tolotra MSC, Pullmatur ary Royal Caribbean.
2 Fitsangatsanganana an-dranomasina Pullmatur eny amin'ny Ranomasina Baltika
MSC dia manana safidy marobe mandritra ny volana Aogositra fa andao mankany amin'ny tolotra mora vidy indrindra: avy amin'ny 869 euro isan'olona, ​​kapoaka sy sidina ao anatiny. Ity dia ity dia mitaingina ny Opera MSC ary sokajy fitsangantsanganana kintana efatra ity maharitra valo andro. Araka ny nolazaiko, dia misy sidina mankamin'ny seranan-tsambo fiaingana sy ny famindrana ary misy izany tabilao feno.
Ny dia dia manomboka amin'ny sidina avy any Madrid na Barcelona mankany Copenhague izay ialan'ny sambo. Manam-potoana hitsidihana ny tanàna sy ny zavatra manintona azy ianao rehefa miainga ny fitsangantsanganana amin'ny 6 ora tolakandro. Amin'ny andro faharoa dia tonga ao amin'ny tanànan'ny Warnemunde amin'ny valo ora. Tanàna nanjono taloha izy io ary miaina ny fizahan-tany fitsangantsanganana ankehitriny. Rehefa mivoaka amin'ny 7 ora folakandro ny sambo dia manam-potoana handehanana manodidina ianao ka hahita trano fitaratra tsara tarehy.
Ao anaty sambo tanteraka ny andro fahatelo satria andro an-tsambo. Amin'ny andro fahefatra dia tonga ianao Helsinki, Failandy, amin'ny sivy ora maraina. Mijanona hatramin'ny 9 tolakandro ianao ary mazava ho azy fa andro iray handehanana sy hahafantarana ny tanàna, ny zavatra manintona azy ary ny entona entiny. Rehefa avy nandany ny alina tao anaty sambo, rehefa nandeha sambo, dia tonga tao amin'ilay tanàna mahafinaritra an'i St. Petersburg, ny Venise of the North, ny tanànan'ny tetezana, ny tanànan'i Peter the Great.
Manana adiny folo ianao hankafizanao ity tanàna rosiana ity, lava loatra mba tsy hahadino anao ny zava-nisongadina. Amin'ny andro fahenina amin'ny fitsangatsanganana dia tonga ianao Tallinn, renivohitr'i Estonia, eo amoron'ny Helodranon'i Failandy ary misy tranga taloha Lova manerantany. Hatsaran-tarehy. Eto ianao dia mijanona manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 4 hariva Ny ampitso dia mandany azy amin'ny sambo ary amin'ny faha-8 dia miverina any Copenhagen ianao. Rehefa tafiditra ao ny famindrana dia hoentina any amin'ny seranam-piara-manidina ianao avy any amin'ny fiverenanao any Madrid na Barcelona.
Ny sambo MSC Opera dia tamin'ny 2004. Sambo tsotra misy varavarankely maro sy fomba kanto izy io. Izy io dia manana trano fisakafoanana roa lehibe, efamira 27 metatra toradroa misy lavarangana sy eny ambonin'ny tokotanin-tsambo, hahitana fomba tsara kokoa. Misy kabine roa sosona anatiny, efi-trano avo roa heny anatiny, misy lavarangana roa sy suite miampy roa. Izy io koa dia manana spa sy lalao virtoaly virtoaly amin'ireo fanavaozana farany farany.
ny vidiny ho an'ireo sambo fitsangantsanganana MSC Baltic Sea Ireto manaraka ireto:
23 Jolay: 869 euro (ao anaty trano), 1059 (trano ivelan'ny trano), 1169 euro (trano misy lavarangana) ary 2199 euro (suite).
6 Aogositra: 1219 euro (ao anaty trano) ary 1369 euro ho an'ny trano ivelany. Ny roa ambiny dia tanteraka.
20 aogositra: ny kabine anatiny ihany no mijanona amin'ny 1119 euro.
Fitsangatsanganana an-dranomasina Pullmatur eny amin'ny Ranomasina Baltika
Ity orinasa fitsangantsanganana an-tsambo ity dia manome ny tsara indrindra amin'ny Ranomasina Baltika amin'ny dia mahavariana 8 andro 7 alina. Mialà amin'i Rostock, Alemana ary tonga any Helsinki. Ny sambo dia ny sambo Pullatur Monarch ary ireo firenena ho fantatra dia Failandy, Rosia, Estonia, Suède ary Alemana. Ny vidin'ny fampiroboroboana dia 799 euro isaky ny olona manana sidina tafiditra, na dia miresaka momba ny volana Aogositra aza isika dia hiakatra kely: 1049 euros.
Inona ny làlan-kaleha? Ampahan'ny Rostock, iray amin'ireo seranan-tsambo lehibe any Alemana eo amin'ny Ranomasina Baltika, miaraka amina vanim-potoana antenantenan'ny rindrina sy ny fiangonana taloha. Eto ianao dia mijanona roa andro satria ny fahatelo dia fitetezana tanteraka. Amin'ny andro fahefatra dia tonga ianao Stockholm, tanàna iray miorina amin'ny nosy efatra ambin'ny folo eo am-bavan'ny lava iray ao anaty ranomasina. Amin'ny andro dimy dia hihaona aminao izy amin'ny Tallinn, Lova Iraisam-pirenena sy renivohitr'i Estonia raha tamin'ny andro fahenina dia tonga ilay sambo St. Petersburg.
Ao amin'ity tanàna rosiana tsara tarehy ity dia mijanona mandritra ny roa andro ny sambo hatramin'ny nahatongavan'ilay sambo fitsangantsanganana Pullmatur Helsinki. Karazana sambo inona no atao hoe Pullmatur Monarch? Izy io dia manana trano filokana, trano famakiam-boky, fivarotana tsy andoavam-bola, teatra, fampisehoana andro aman'alina, fety, disko ary klioba manokana ho an'ireo ankizy kely mikarakara ny fialamboly amin'izy ireo raha mifalifaly ireo olon-dehibe.
Fitsangatsanganana an-tsambo izay Spa ary manolotra WiFi amin'ny sambo (Misy fonosana misy minitra maimaimpoana fa tsy maintsy mamandrika alohan'ny Internet ianao). Misy ihany koa ny jacuzzis, sauna ary salon fanaovana hatsaran-tarehy. Ho an'ny mavitrika kokoa dia ny fiakarana vato, gym sy latabatra ping pong, kianja filalaovana basikety ary dobo filomanosana mahafinaritra. Raha ny resaka gastronomie dia feno sy mahavariana ny sakafo maraina, misy trano fisakafoanana à la carte maromaro ahafahanao misakafo atoandro sy misakafo hariva. Raha mpihinan-kena ianao na tsy mahazo misakafo miaraka amin'ny gluten na lactose dia tsy misy ny olana. Mifanaraka ny menio.
Inona ny hevitrao 7 andro any Skandinavia sy Russia mitaingina sambo Royal Caribbean? Ny sambo resahina dia ny Serenade du ranomasina ary ny seranan-tsambon'ny fialana dia Copenhagen. Ny fitsidihana dia misy an'i Stockholm, Helsinki, Tallinn ary Saint Petersburg.
Andro voalohany nialan'ny sambo fitsangantsanganana Danemark, ny faharoa dia ny fitetezana rehetra ary amin'ny andro fahatelo ahatongavanao eo amin'ny seranan'i Stockholm, any Suède. Tonga amin'ny 9 maraina ianao ary miala amin'ny 5 hariva ka misy fotoana handehanana manodidina ity tanàna ity, ilay tanàna antitra tsara tarehy sy ireo fivarotana, trano fisakafoanana ary tranombakoka ao aminy. Mandeha alina ny sambo ary tonga amin'ny Tallinn, Estonia, tamin'ny 9 ora sy sasany maraina dia vakoka manerantany ny tanàna taloha ka mpijery medieval tena tsara tarehy tokoa. Amin'ny 30:5 dia manao veloma an'i Talinn ianao ary mandeha an-tsambo mandra-pahatonganao, ny ampitso amin'ny 30 maraina amin'ny St. Petersburg.
Amin'ny faha-7 ianao dia mahatratra Helsinki amin'ny 7 maraina fa ny fijanonana dia fohy kokoa noho ny any amin'ny tanàna hafa satria miala amin'ny 2 ora tolakandro indray ny sambo. Ny andro sisa dia mandeha an-tsambo ary ny ampitso amin'ny 7 maraina dia tonga ianao Copenhague indray.
Inona no tafiditra ao anatin'ity fitsangatsanganana Royal Caribbean ity? Fonenana, fialamboly manazava, fandaharana ho an'ny ankizy ary fotodrafitrasa lafo vidy miaraka amin'ny gym, teatra, sinema sy trano fisakafoanana, ary koa dobo filomanosana. Ny vidiny dia ahena ho 998 USD isam-batan'olona ary vidiny izay amin'ny alàlan'ny fanakarama azy izao dia tazomina mandra-pahatongan'ny taona manaraka.
Tsy ireo ihany no safidy raha ny momba azy Fitsangatsanganana an-dranomasina Baltic 2016/2017. Misy maro hafa. Na dia tsy olon-tiana fitsangantsanganana an-tsambo aza ianao dia fohy ireo dia ireo, tsy mihoatra ny herinandro, ho ahy dia ampy ny ho eny ambony sambo avy eto ho any. Raha misy mahaliana anao mihoatra ny iray hafa, dia afaka mahita izany hatrany amin'ny tranokala ofisialin'ny orinasa tsirairay ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Fitsangantsanganana an-dranomasina Baltika 2016
Ny morontsiraka tsara indrindra any amin'ny nosy Canary